China Drive In Racking umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
Qhuba kwi Racking
1. Qhuba ngaphakathi, njengegama layo, ifuna i-forklift drives ngaphakathi kwirakhi ukuze isebenze iipaliti.Ngoncedo lomzila wesikhokelo, i-forklift iyakwazi ukuhamba ngokukhululekile ngaphakathi kwe-racking.
2. Ukuqhuba kwisisombululo esineendleko eziphezulu zokugcina uxinano oluphezulu, oluvumela ukusetyenziswa okuphezulu kwendawo ekhoyo.
Uhlobo lweRacking: Qhuba ungeneirakhi
Isicelo: big ibhetshi kunye neentlobo zemithwalo ezincinci, njengokutya, icuba kunye nesikhenkcisi.
① Ukusetyenziswa okuphezulu kwendawo yokugcina impahla
Xa kuthelekiswa ne-pallet rack ekhethiweyo, ukuqhuba kusebenzisa i-80% yendawo yokugcina ngokususa ii-aisles, okwenza izinga lokusetyenziswa kwendawo yokugcina impahla linyuke nge-40%.
② ubude obunokulungiswa kunye nobunzulu
Ukuqhuba kwi-racking kunokusekwa ukuya kwi-8 pallets ubunzulu kunye ne-10m ukuphakama.Kodwa i-design ekhuthazwa kakhulu yi-4-5 ye-pallets ubunzulu kunye namanqanaba ama-4 aphezulu ekulayisheni okukhuselekileyo / ukukhulula kunye nokulawula okufanelekileyo.
③ Igumbi elibandayo
Ngenxa yoxinaniso oluphezulu oluqhutywa kwi-racking system lubonelela, lufanelekile ukugcinwa kwiqondo lokushisa eliphantsi kwigumbi elibandayo.Kuba iicoolers kunye nezikhenkcezi ziyipropathi ebiza kakhulu, ukufumana owona mthamo wogcino kunye nokusebenza kakuhle kubaluleke kakhulu.Sisisombululo esihle kakhulu sokugcina igumbi elibandayo.
④ Qhuba ngaphakathi kwaye Qhuba nge
Ukuqhuba kwirakhi yiFILO(eyokuqala ekugqibeleni) uhlobo lwerakhi, efuna ukulayishwa kunye nokubuyisela kwicala elinye.Inokwandiswa kwesinye isakhiwo-Drive ngokusebenzisa racking.
Ukuqhuba unokuqonda i-FIFO (okokuqala kuqala) injongo ngokususa ibracing yangasemva, ke ukulayisha kuvela kwelinye icala kwaye ukothula kuvela kwelinye.Inzuzo kukuba umthamo wokugcina unyuswa kwakhona, ngelixa i-disadvantage kukuba ukuzinza kwe-racking kuncitshisiwe ngaphandle kokubuyisela umva.
Ngaphambili: Carton Flow Racking
Okulandelayo: I-Gravity Racking
Umhambisi, I-Four Way Shuttle, ICarton Live, Asrs Ugcino, IShuttle yomntwana, Qhuba kwi Racking,